7 Zvino Jerubhaari,+ kureva Gidhiyoni,+ nevanhu vose vaaiva navo, vakafumomuka vakadzika musasa patsime reHarodhi; uye musasa waMidhiyani wakanga uri kuchamhembe kwake, pachikomo cheMore, chaiva mubani. 2 Zvino Jehovha akati kuna Gidhiyoni: “Vanhu vauinavo vakawandisa kuti ndiise Midhiyani muruoko rwavo.+ Zvichida Israeri angazvikudza+ pamberi pangu, achiti, ‘Ruoko rwangu ndirwo rwakandiponesa.’+ 3 Ndapota, zvino shevedzera vanhu vachinzwa, uchiti, ‘Ndiani anotya uye anodedera? Ngaadzokere.’”+ Naizvozvo Gidhiyoni akavaedza. Nokudaro, zviuru makumi maviri nezviviri zvevanhu vacho zvakadzokera, asi paiva nezviuru gumi zvakasara. 4 Zvisinei Jehovha akati kuna Gidhiyoni: “Pachine vanhu vakawandisa.+ Ita kuti vaburukire kumvura kuti ndivaedze ikoko nokuda kwako. Munhu wose wandichati kwauri, ‘Uyu achaenda newe,’ ndiye achaenda newe, asi munhu wose wandichati kwauri, ‘Uyu haangaendi newe,’ ndiye asingazoendi.” 5 Naizvozvo akaita kuti vanhu vacho vaburukire kumvura.+ Jehovha akabva ati kuna Gidhiyoni: “Munhu wose anokapa mvura norurimi rwake sokukapa kunoita imbwa, uchamuisa pake oga, ndizvo zvauchaitawo nomunhu wose anopfugama nemabvi ake kuti anwe.”+ 6 Vaya vaikapira kumuromo wavo nemaoko avo vakasvika varume mazana matatu. Asi vamwe vanhu vose, vakapfugama nemabvi avo kuti vanwe mvura. 7 Zvino Jehovha akati kuna Gidhiyoni: “Ndichakuponesai uye ndichaisa Midhiyani muruoko rwenyu,+ ndichishandisa varume mazana matatu vaita zvokukapa. Vamwe vanhu vose, ngavaende mumwe nomumwe kunzvimbo yake.” 8 Naizvozvo vakatora mbuva dzevanhu vacho mumaoko avo, nehwamanda+ dzavo, akaendesa varume vose vaIsraeri mumwe nomumwe kumba kwake; uye akaramba aine varume mazana matatu. Kana uri musasa waMidhiyani, wakanga uri pasi pake mubani.+ 9 Zvino usiku ihwohwo+ Jehovha akati kwaari: “Simuka, buruka uende kumusasa, nokuti ndauisa muruoko rwako.+ 10 Asi kana uchitya kuburuka, burukira kumusasa, iwe naPura mushandi wako.+ 11 Teerera zvavachataura,+ pashure pacho maoko ako achava nesimba,+ uye uchaburukira kumusasa wacho.” Iye naPura mushandi wake vakabva vaburukira kumucheto kwevaya vakanga vakagadzirira kurwa vaiva mumusasa. 12 Zvino Midhiyani naAmareki neVokumabvazuva+ vose vakanga vati wiriwiri mubani vari vazhinji semhashu;+ uye ngamera dzavo+ dzakanga dzisingaverengeki, dziri zhinji sejecha riri pamhenderekedzo yegungwa. 13 Zvino Gidhiyoni akasvika, uye, tarira! mumwe murume airondedzera hope dzake kushamwari yake, akati: “Hedzino hope dzandarota.+ Tarira! panga paine keke reraundi rechingwa chebhari ranga richikungurukira kumusasa waMidhiyani. Rabva rasvika patende rikarirova zvokuti rawa,+ uye raripidigura, tende rikati pwatata.” 14 Shamwari yake yakapindura+ kuti: “Hapana chimwe kunze kwebakatwa raGidhiyoni+ mwanakomana waJoashi, murume wokwaIsraeri. Mwari wechokwadi+ aisa Midhiyani nomusasa wose muruoko rwake.”+ 15 Zvino Gidhiyoni paakangonzwa kurondedzerwa kwehope dzacho nokutsanangurwa kwadzo,+ akatanga kunamata.+ Pashure paizvozvo akadzokera kumusasa wevaIsraeri akati: “Simukai,+ nokuti Jehovha aisa musasa waMidhiyani mumaoko enyu.” 16 Akabva akamura varume mazana matatu kuva mapoka matatu akaisa hwamanda+ mumaoko avo vose nezvirongo zvikuru zvisina chinhu, nemazhenje omoto mukati mezvirongo zvikuru. 17 Akati kwavari: “Dzidzai nokunditarira, muite saizvozvo. Pandinosvika pamucheto pomusasa, muite sezvandichaita. 18 Pandinenge ndaridza hwamanda, ini navose vandiinavo, muridzewo hwamanda, nemiwo, makakomba musasa,+ uye muti, ‘raJehovha+ neraGidhiyoni!’” 19 Kwapera nguva yakati, Gidhiyoni akasvika nevarume zana vaaiva navo pamucheto pomusasa pakutanga kwokurinda kwepakati pousiku.+ Ivo vakanga vachangopedza kuisa varindi. Vakaridza hwamanda,+ vakaputsa zvirongo zvikuru zvemvura zvaiva mumaoko avo.+ 20 Ipapo mapoka matatu acho akaridza hwamanda,+ akaputsa zvirongo zvikuru akanyatsobata mazhenje omoto noruoko rwawo rworuboshwe uye noruoko rwawo rworudyi akabata hwamanda kuti adziridze, akatanga kushevedzera achiti: “Bakatwa raJehovha+ neraGidhiyoni!” 21 Nguva yose iyi, mumwe nomumwe akaramba akamira panzvimbo yake, vakakomba musasa, musasa wacho wose ukamhanya, ukatanga kushevedzera, ukatiza.+ 22 Vane mazana matatu+ vakaramba vachiridza hwamanda,+ Jehovha akaita kuti bakatwa romumwe nomumwe rirwisane nomumwe mumusasa wose;+ uye musasa wakaramba uchitiza kusvikira kuBheti-shita, nokuZerera, nokumucheto weAbheri-mehora+ iri paTabhati. 23 Munguva iyi varume vaIsraeri vakaunganidzwa vachibva kwaNaftari+ naAsheri+ naManase+ wose, uye vakadzingirira+ Midhiyani. 24 Gidhiyoni akatuma nhume munzvimbo ine makomo yose yaEfremu,+ achiti: “Burukai munosangana naMidhiyani, muvatangire kutora mvura kusvikira kuBheti-bhara naJodhani.” Naizvozvo varume vose vaEfremu vakaunganidzwa, vakatora mvura yacho+ kusvikira kuBheti-bhara naJodhani. 25 Vakabatawo machinda maviri aMidhiyani, kureva Orebhu naZeebhu;+ vakaurayira Orebhu padombo raOrebhu,+ uye vakaurayira Zeebhu pachisviniro chewaini chaZeebhu. Vakaramba vachitevera Midhiyani,+ vakaunza musoro waOrebhu nowaZeebhu kuna Gidhiyoni munzvimbo yaJodhani.+